Solitaire 4.11 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.11 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ Solitaire
Solitaire ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Solitaire ကဒ်ဂိမ်းများအားဖြင့်အခမဲ့ Solitaire ဟာ android အပေါ် # 1 klondike solitaire ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ solitaire အခမဲ့လူကြိုက်များနှင့်ဂန္ကဒ်သင်သိဂိမ်းများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏။
ကျနော်တို့ဂရုတစိုက်အံ့ဖှယျ solitaire ဂန္သို့ယက်တစ်လတ်ဆတ် solitaire အခမဲ့ခေတ်မီကြည့်လူတိုင်းချစ်ကြောင်းခံစားရဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
ရှုခင်းသို့မဟုတ်ပုံတူဖြစ်စေအမြင်များထဲမှာ,, ပြတ်သားရှင်းလင်းသောနှင့်ဖတ်ရှုဖို့လွယ်ကူပါတယ်ကတ်များရိုးရှင်းပြီးအမြန် animations တွေကိုနှင့်သိမ်မွေ့အသံခံစားရသည်။
သငျသညျတစျခုတညျးကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူကတ်များရွှေ့သို့မဟုတ်မိမိတို့၏လိုရာခရီးမှသူတို့ကိုဆွဲယူနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျဖြစ်စေအများဆုံးဂိမ်း winnable ဖြစ်ကြောင်း, သို့မဟုတ်သင်ကို up-to စိန်ခေါ်ခံစားရသည်မှန်လျှင်, Draw3နှင့်ဂတ်စ်ကစားသည် Modes နှင့်သင်၏ကံကြိုးစားကြရှိရာလွယ်ကူသော Draw 1 ဂိမ်းများကိုဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
သငျသညျအခမဲ့သင့်ရဲ့ Solitaire ကဒ်ဂိမ်းတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိဖြည့်စွက်ပျော်မွေ့နေလျှင်, န့်အသတ် personalization ဖြစ်နိုင်ခြေအဘို့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံစာကြည့်တိုက်ကနေဓါတ်ပုံနှင့်အတူနောက်ခံနဲ့ကဒ်ကျော customize ။
♠ 1 ကဒ် (လြယ္ကူ) Draw
♠3ကတ်များ (စက်) Draw
♠ App ကိုနောက်ခံ 14 မျိုးကို
♠ကတ်နောက်ခံ 31 မျိုးကို
♠, ချွေအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပညာရှိကဒ်ဂိမ်းများကို interface ကို
တစ်ကဒ်သို့မဟုတ် Drag and Drop ပြုလုပ်ပြီးနေရာ♠လူပျိုကိုထိပုတ်ပါ
♠နျ Standard Klondike Solitaire အမှတ်ပေး
သင်၏ဓါတ်ပုံများထံမှ♠စိတ်တိုင်းကျနောက်ခံကား & ကတ်များ
♠ Timer, ရွေ့လျားနှင့်စာရင်းဇယား
♠ Unlimited ပြန်လုပ်ရန်
တစ်ဖြေရှင်းဂိမ်းပြီးအောင်♠ Auto-Complete option ကို
♠ပျော်စရာ & စိန်ခေါ်မှုအောင်မြင်မှုများ
♠စိန်ခေါ်မှုကျပန်းဂိမ်းသို့မဟုတ်ကစားအနိုင်ရဂိမ်း (solution ကိုရရှိနိုင်မည်);
♠လက်-လက်ဝဲနှင့် right- လက် option ကို;
♠အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုအတွက် OFFLINE Play ။
မဆိုခေတ်သက်ဆိုင်လူကြိုက်အများဆုံး Solitaire ကဒ်ဂိမ်းများကို join နှင့် NOW ကသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆော့ကစား!
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ solitaire ကဒ်ဂိမ်းများကိုကစားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Klondike Solitaire ဂန္ဥပမာနာမည်ကြီး Solitaire အမှန်တကယ် Klondike Solitaire ဖြစ်ပါသည်, ထိုယေဘုယျအမည်အား '' Solitaire '' အားဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံ 'ဟုဆိုအပ်၏။ ဒါကဖြစ်ကောင်းကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံး solitaire ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Klondike solitaire ဂန္တဦးတည်းကုန်းပတ် (52 ကဒ်များ) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ နှစ်ဆယ်ရှစ်ကတ်များညာဘက်လက်ဝဲကနေခုနစ်ခုမှတဦးတည်းအနေဖြင့်တိုးမြှင့်ပုံနှုန်းကတ်အရေအတွက်နှင့်အတူ7Tableau လိပ်ခေါင်းသို့ကုန်းပတ်ကနေကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေကြသည်။ ထိပ်ကဒ်ကြွင်းသောအရာကိုဆင်းရင်ဆိုင်ရထရင်ဆိုင်ရသည်။
7 Tableau ထပ်,
ဂိမ်းရဲ့အရာဝတ္ထု Ace ကို, 2,3,4,5,6,7,8,9,10, ဂျက်, ဘုရင်မကြီးဘုရင်ထံမှဝတ်စုံအတွက်အမြစ်တည်ဆောက်ရန်ကုန်းပတ်အပေါငျးတို့သကတ်များသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်နည်းလမ်း solitaire သောအရာကိုတစ်ဦးအကျဉ်းဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
Solitaire ကဒ်အခမဲ့ဂိမ်းသို့မဟုတ်သည်းခံခြင်း၏ဂိမ်းများကိုသူတို့သိနိုင်မည်ဖို့အသုံးပြုအဖြစ်ကဒ်ဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောကဒ်ကုန်းပတ်နှင့်အတူကစားများနှင့်တဦးတည်းပုံသို့မဟုတ်လိပ်ခေါင်းမှတဦးတည်းဆုံးဖြတ် display ကိုကနေအပေါငျးတို့သကတ်များကိုရွှေ့ဖို့ဖြစ်တယ်ရသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ solitaire ကစားထွက်ယင်း၏အသုံးပြုမှုသံသယနှင့်အတူရှိနေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တစ်ဦး solitaire ဂိမ်းကစားခြင်းအတှကျအိပျညနေစဉ်အတွင်းသငျသညျကုမ္ပဏီစောင့်ရှောက်မည်။ တစ်ဦးအလေးပေးသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ကိုပြုလုပ်ရန် solitaire ၏တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့်အနားယူရန်အကြီးအလွယ်ကူခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါ့အပြင်ဗြိတိန်မှာစိတျရှညျအဖြစ်လူသိများ Solitaire ဂိမ်း, တစ်ခုတည်းကစားသမားများအတွက်အခမဲ့ Solitaire ကဒ်ဂိမ်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ solitaires တစ်တိကျတဲ့သမိုင်းတည်ရှိပေမယ့် solitaires ကဒ်ဂိမ်းတွေနဲ့မွေးဖွားခဲ့ကြသည်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်ပါဘူး။ အဆိုပါစကားလုံး solitaire ပြင်သစ်မူရင်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်သည်းခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယင်းငြင်းခုံပေါ်ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ဒါဟာ 25 ကဒ်ဂိမ်း်, အမျိုးသမီး Adelaide Cadogan ဖွငျ့စိတျရှညျပုံဥပမာကဒ်ဂိမ်းများခဲ့ 1870. ခုနှစ်ပုံနှိပ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာနျပုံနှိပျဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်လူအပေါငျးတို့၏အကျော်ကြားဆုံး solitaire ကြောင့် "Klondike" တောင်ပုံစံသတိပေးသော Tableau အပေါ်ကတ်များ၏သဘောထားမှ၎င်း၏အမည်ကိုယူရာ "Klondike" ဖြစ်ပါတယ်။
Solitaire အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Solitaire အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Solitaire အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Solitaire အား အခ်က္ျပပါ
catnamiw စတိုး 1.95k 4.96M
Solitaire ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Solitaire အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Lemon Game, Inc
Release date: 2019-08-01 08:21:33
လက်မှတ် SHA1: 6B:A7:7F:B2:2B:18:40:7C:34:E0:C8:E5:E8:23:8B:90:81:FA:27:FA
အဖွဲ့အစည်း (O): zhongbo
Solitaire APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ